Dowladda oo sheegtay in duqeyn lagu diley Xubno Shabaab ah – Radio Baidoa
Ciidamada Dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibadooda Mareykanka ayaa ka fuliyay aagga degaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose duqeyn diyaaradeed oo bartilmaameedkeedu ahaa Xubno ka tirsanaa Al-Shabaab.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaas oo dhacdey shalay oo taariikhdu ku beegneyd 9/3/2020 lagu diley Afar Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab.
“Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo la-hawlgalayaasheeda Mareykanka waxay dadaal dheeri ah u galeen sidii looga hortegi lahaa dhibaatada dadka rayidka ah ay ku hayaan Xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa lagu yiri”Qoraalka Wasaaradda.
Sidoo kale Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegtay inay weli socdaan howlgallada iyo duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab,isla markaana duqeymihii dhacay sanadkaan tirada Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee lagu diley ay gaarayaan ilaa 27 Xubnood.
Wasaaradda Warfaafinta ka bixin faah faahin intaasi ka dheer oo ku aadan Duqeynta la sheegay in lagu diley Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab.
Caasimadda Koonfur Galbeed Oo Mashaariic laga Dhagaxdhigey